Ny Varan-dranomasina monina any Bahamas dia mahazo ny lokan'ny tany Prince Prince malaza
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Ny Varan-dranomasina monina any Bahamas dia mahazo ny lokan'ny tany Prince Prince malaza
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Minisiteran'ny fizahantany, fampiasam-bola ary fiaramanidina Bahamas dia miarahaba an'i Coral Vita avy any Grand-Bahama nahazo ny lokan'ny Earthshot tany an-tany iray kilao an'ny Prince William tany Alexandra Palace, any Londres ny alahady teo. Ny Worldshot Prize an'ny £ 1 tapitrisa dia natolotry ny Royal Foundation ho an'ny mpandresy dimy isan-taona noho ny vahaolana vaovao momba ny fanamby ara-tontolo iainana. Ny loka dia omena amin'ny sokajy dimy: "Arovy sy avereno ny natiora," "Velomy ny ranomasintsika," "Diovy ny rivotra iainantsika," "Manangana tontolo tsy misy fako" ary "Amboary ny toetrantsika." Anisan'ireo mpandresy loka dimy voalohany, nomena ny loka 1 tapitrisa £ ny ekipa Coral Vita tamin'ny sokajy "Revive Our Ocean".
Hetsika siantifika iray miorina amin'ny nosy Grand Bahama no nahazo fankasitrahana manerantany momba ny fiatraikany amin'ny vokadratsin'ny fiakaran'ny mari-pana manerantany amin'ny ranomasin'izao tontolo izao.
Ny Coral Vita dia afaka mampitombo ny haran-dranomasina hatramin'ny avo 50 heny noho ny fitomboan'ny natiora, sady manatsara ny faharetana manohitra ny ranomasina misy asidra sy manafana.
Io fotodrafitrasa io dia miverina ho ivom-pianarana fanabeazana an-dranomasina ary nalaza ho mahasarika mpizahatany.
Rehefa nahazo ny vaovao momba ny Earthshot Prize nomena an'i Coral Vita, ny Tale jeneralin'ny Minisiteran'ny fizahantany, ny famatsiam-bola ary ny fiaramanidina Joy Jibrilu dia nanambara hoe: Nahazo fankatoavana eran-tany noho ny fiantraikany mba hamahana ny vokatry ny fiakaran'ny maripana amin'ny ranomasin'izao tontolo izao. ”
Tamin'ny taona 2018, Sam Teicher sy Gator Halpern, mpanorina ny Coral Vita, dia nanangana toeram-piompiana haran-dranomasina tao Grand Bahama hiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro ao amin'ny The Bahamas. Io fotodrafitrasa io dia miverina ho ivom-pianarana fanabeazana an-dranomasina ary nalaza ho mahasarika mpizahatany. Herintaona taorian'ny nanombohana ity toerana ity dia nandrava ny nosy Grand Bahama ny rivodoza Dorian, izay nanamafy ny fanapahan-kevitr'ilay orinasa hamonjy ireo haran-dranomasina misy antsika. Amin'ny fampiasana fomba fandrosoana, Coral Vita dia afaka mampitombo ny haran-dranomasina hatramin'ny avo 50 heny noho ny fitomboan'ny natiora, sady mampatanjaka ny faharetana manohitra ny ranomasina misy asidra sy manafana. Ireo fomba fandrosoana siantifika ireo dia nahatonga an'i Coral Vita ho kandidà tonga lafatra amin'ny Loka Earthshot.
Ny Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge Earthshot Prize dia novolavolaina tamin'ny 2021. Ny tanjon'ny loka dia ny hampirisika ny fanovana ary hanampy amin'ny fanamboarana ny planeta afaka folo taona ho avy.
Isan-taona, mandritra ny folo taona manaraka, loka dimy tapitrisa pounds isan-taona no homena ireo mpankafy tontolo iainana, amin'ny fanantenana hanome vahaolana 50 amin'ireo olan'ny tontolo iainana lehibe indrindra eto an-tany amin'ny taona 2030. ny loka manerantany malaza. Nisy finalist telo isaky ny sokajy dimy. Ny dimy ambiny folo farany famaranana dia hotohanan'ny The Earthshot Prize Global Alliance, tambajotram-piantrana, ONG, ary orinasa tsy miankina manerantany izay hanampy amin'ny famolavolana ny vahaolana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Earthshot kitiho eto.
Mpizahatany avy any Polonina: Saika vonona amin’ny...
Napetraka ho an'ny Astroworld Music izao ny raharaha momba ny fahafatesana...
UNWTO mandrara ny asa fanaovan-gazety mitsikera ao amin'ny tsenan'ny fitsangatsanganana eran-tany
NASA teknolojia aviation mba hitsitsiana fotoana ho an'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina
Eo amin'ny faravodilanitra ve ny Apokalipsy Zombie?
Etazonia, UK, Frantsa ary Alemana dia manentana ny olom-pireneny ...
Trano fandraisam-bahiny Trump International any Washington...